Momba anay - Foshan MBP auto parts Co., Ltd.
Mifantoha amin'ny famokarana faritra kamiao
Lalina amin'ny vahaolana famokarana malefaka amin'ny indostria miaraka amin'ny fitaovana tsara, fifehezana kalitao ary fisehoana tsara
Sombin'ny fiara MBP - mpamatsy marika amin'ny kamiao malaza eran-tany
20 taona tsy mitsaha-mitombo traikefa amin'ny orinasa kamio sy tranofiara
Fahaizana manokana haingo manokana ho an'ny fanamboarana tranofiara fampiharana anao manokana
Foshan MBP auto parts Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2017 ary ny mpiara-miasa rehetra dia miasa amin'ny indostrian'ny tranofiara kamio mihoatra ny 20 taona miaraka amin'ny hafanam-po sy hafanam-po amin'ny famokarana fitaovana fitaterana. Izy io dia mpamatsy vahaolana amin'ny fizarana kamiaobe kamiaobe ary manolo-tena amin'ny fitaterana faritra fivarotana kamiao tsara kalitao ho an'ny mpampiasa manerantany.
Taorian'ny fitsapana ara-barotra sy fitsapana an-dàlana nandritra ny taona maro tany Afrika, Afovoany Atsinanana, Azia Atsinanana, Amerika atsimo, ny fiaran'ny fiara MBP dia nanomana vokatra mety ho an'ny toe-piainana tsy manam-paharoa, ny fahafahan'ny entana. Miaraka amin'ny fivoarana mitohy sy ny fahatokisan'ny mpanjifa, ny ampahan'ny fiara MBP dia nanjary mpamatsy entana an'ny kamiao malaza eran'izao tontolo izao an'i China. Ny faritra fiara MBP dia nametraka ny rojom-pamokarana sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Sombiny fiara MBP
Mifantoha amin'ny fanomezana fitaovana tsara, habe marina, rojo famatsiana faritra misy kamio.
Fanampiana hitaterana faritra misy kamio marika tsara kalitao ho an'ny mpampiasa manerantany.
Ampio ny fitaterana ampahany amin'ny kamiao marika kalitao tsara ho an'ny mpampiasa manerantany.
Ny ampahan'ny fiara MBP dia miavaka amin'ny R&D, famokarana sy marketing amin'ny tranofiara fitifirana, tranofiara ambany fandriana, kamiao mpitondra sambo solika, famaky, fampiatoana mekanika, fitaovam-pitaterana, loharano ravina, valizy fametahana, jiro kamiao, singa misy rafitra ao ambanin'ny vondrona 24 samy hafa, mividy ary mivarotra vokatra 5000 mahery. Vokatra marobe mifanentana amin'ny fiara varotra Shina sy Eoropeana ary Etazonia.
Ny fampiharana dia misy fitaterana solika, fitaterana kaontenera, fitaterana milina mavesatra sy fitaovana, fitaterana simenitra marobe, ampahany amin'ny kamiao sy tranofiara ambongadiny, fikolokoloana kamio sy tranofiara, fanamboarana semi trailer. Vokatra sy haitao maromaro no nahazo patanty nasionaly ary manana CE, ISO16949, DOT, ADR, EMARK, SASO, SABER, SONCAP, COC CERTIFICATE.
Toetran'ny fihenan'ny vatan'ny hazo
Ampitao sy hamafiso ireo vokatra amin'ny alàlan'ny famolavolana 3D alohan'ny hanamafisan'ny mpanjifa ireo vokatra. Ny endrika 3D dia namboarina mba hahafahan'ny mpanjifa mahafeno ny filan'ny mpanjifa. Ny famakafakana ny singa voafetra dia afaka mifanaraka amin'ny fahombiazan'ny vokatra alohan'ny famolavolana. Fitsapana dabilio vokatra vaovao hiantohana ny kalitaon'ny vokatra sy ny faharetany
Manantena ny ho avy, ny ampahany fiara MBP dia hanaraka ny fangatahan'ny mpanjifa ho toy ny paikady fampandrosoana lehibe, hanamafy hatrany ny fanavaozana ny teknolojia, ny fanavaozana ny fitantanana ary ny fanavaozana ny varotra ho fototry ny rafitra fanavaozana, ary mikendry ny ho tonga mpitarika ny fampiharana fitaterana mety sy azo itokisana vahaolana.
Fandrosoana mandroso ho an'izao tontolo izao - Manondrana firenena efa ho 30+ miaraka amin'ny kojakoja 5000+.